साहित्यको अर्थMain Samachar
विश्व पौडेल (अर्थशास्त्री)
१४ पुष २०७७, मंगलवार १५:३१ प्रकाशित
एकातिर आर्थिक नीतिहरुले साहित्यको संवद्र्धनमा असर पार्छन् । यो वर्षको बजेटमा विदेशबाट ल्याइएका पुस्तकमाथिको १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउँदा भएको व्यापक प्रतिक्रिया यसको एक उदाहरण हो । अर्कोतिर साहित्यले अर्थशास्त्रलाई टेको दिन्छ । रूद्रराज पाण्डेको रुपमती उपन्यासमा प्रमुख पात्र रविलालले लगाएको कपडाको वर्णनले विसं १९९० तिरको नेपालको मध्यमवर्गीय व्यक्तिले उपभोग गर्ने प्रवृत्तिबारे जान्न सकिन्छ भने बालकृष्ण समको मेरो कविताको आराधन पढ्दा राणाहरुले विदेशी आयातलाई कसरी हेर्थे भन्ने पनि जानकारी हुन्छ ।
सरदार भीमबहादुर पाँडेको त्यस बखतको नेपालले जुद्धशमशेरका पालाको नेपालको आर्थिक कथा भन्छ भने हर्क गुरूङको मैले देखेको नेपालले विसं २०३० को सेरोफेरोको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक चित्र देखाउँछ । देवकोटाको मुनामदन र सीमापारिबाट लेखिएका लीलबहादुर क्षत्रीका बसाइँ र ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ जस्ता साहित्यिक कृतिमा संवेदनशील राज्यको संरक्षणको अभावमा पहाडका हन्डर खाएर विदेश गएका नेपालीका कथा भेटिन्छन् ।
साहित्यले अर्थशास्त्रलाई धेरै मद्दत गर्न सक्छ। पुरानो युगको खाद्यान्न उपभोगको कुरा गरौँ। नेपालको अर्थशास्त्र मात्रै पढ्ने हो भने खाद्यान्न उपभोगको तथ्यांक धेरै अघिसम्म जाँदैन । गरूडनारायण गोङ्गलले विसं १८४६ मा लेखेको सम्झना पढेर हामीलाई भक्तपुरे मल्ल राजा रणजित मल्लको खानाका लागि मसिना चामल, छाँटाको दाल, मुगीको दाल, घिउ, तेल, अचार, रोटी चाहिन्थ्यो भन्ने जानकारी हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहका समकालीन कवि सुवानन्ददासले गोर्खाली महाराजको ज्युनारको यसरी वर्णन गरेका छन्—
अब अर्काे उदाहरण हेरौँ । आर्थिक नाकाबन्दीहरु हामीले नचाहँदा नचाहँदै हाम्रो जीवनको अभिन्न अनुभव भएका छन् । हामीलाई अहिले पनि नाकाबन्दीले के गर्छ भन्ने विस्तृत विवरण थाहा छैन । जतिखेर गोर्खा र काठमाडौंको लडाइँ भइरहेको थियो, त्यतिखेर, विशेषतः १८२० सालपछि काठमाडौंमा चरम आर्थिक नाकाबन्दी गरियो । मुख्यगरी नुन र कपासको नाकाबन्दीले काठमाडौंलाई समस्यामा पार्‍यो । विसं १८१२ मा जन्मेका उदयानन्द अज्र्यालको वर्णन (जुन पछि पृथ्वीन्द्रोदय महाकाव्य भनेर प्रकाशित गरिएको छ)मा एक ठाउँमा जयप्रकाश मल्लले ललितपुरका प्रधानहरुलाई रिसाएर ‘तिमीहरु चोलो सिएर राजकोष भर्ने मान्छेले के गोर्खासँग लड्ने विदेशी सेना पाल्न सक्छौ’ भनेका छन् ।
कपडा बुन्ने पेसा ललितपुरका लागि त्यो बेला महङ्खवपूर्ण भएर त्यसो भनेका हुन् भने यो नाकाबन्दीले ललितपुरलाई गम्भीर प्रभाव पारेको हुँदो हो भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । ललितपुरे राजा तेजनरसिंह मल्ल त गोर्खासँग नलडी भक्तपुरतिर भागेका थिए । यस्तै नुन नभएर पनि मानिसहरुले धेरै दुःख पाएका थिए । कवि अज्र्यालले नाकाबन्दीले पारेको मुद्रास्फीतिलगायत प्रभावबारेमा यस्तो लेखेका छन्—
अर्थात् ‘१० रूपैयाँमा जम्मा दुई थान च्यासिङ कपडा मिल्छ । तेल, घिउ नभएर प्रजाहरु जोगी जस्तै धुस्रे भएका छन् । मान्छेहरु नुनको तलतल मेट्न इँटामा मुख लगाएर चाटिरहेका छन् । भोटिया बाज आउँदा चराहरु रोइकराइ गरे जस्तो घरघरै रोइकराइ छ ।’
अर्ज्यालका अनुसार २५० वर्षअघि आर्थिक नाकाबन्दी हुँदा काठमाडौँ यस्तो थियो !
सन् १८२० सम्म आइपुग्दा युरोपमा प्रिन्टिङ प्रेसको निकै विकास भइसकेको थियो । जर्मनीको मेन्ज सहरमा गुटेन्बर्गले बनाएको प्रिन्टिङ प्रेसको प्रमुख उद्देश्य धार्मिक किताब छाप्ने थियो । अमेरिकी अर्थशास्त्री ब्राड डेलोङका अनुसार जर्मनीमा त्यो बेला एउटा किताबको मूल्य एउटा बिएमडब्लू कारको जस्तो पथ्र्यो (जर्मन श्रमको मूल्यको हिसाब गरेर अहिले हेर्दा) । नयाँ प्रेस सुरूमा भगवान्, त्यसपछि ऐतिहासिक कथाका नायक, त्यसपछि अलौकिक र तिलस्मी चरित्रहरु छाप्नमा केन्द्रित भयो । सामाजिक यथार्थवादी धाराका साहित्यिक पुस्तक पछि आए ।
डिकेन्सले लन्डनको श्रमबजार र शोषणको यथार्थवादी चित्रणका कथा लेख्नु, जेन अस्टेनले प्राइड एन्ड प्रेजुडिस र एमिली ब्रोन्टीले वुदरिङ हाइट्समार्फत बेलायती गाउँका विषमताका कथा लेख्नुअघि नै रबिन्सन क्रुसो र गुलिभर ट्रावल्सले प्रिन्टिङ प्रेसको उपभोग सुरू गरेका थिए ।
नेपालीमा सुरूमा लेखिएका पुस्तक महाभारत वा रामायण आदि मुलुकमा लोकप्रिय धार्मिक ग्रन्थका नेपाली अनुवाद थिए । मूल महाभारत वा रामायणको कथा लेखन उत्कृष्ट छ । महाभारतमा धेरै उपकथा छन् । शान्तिपर्वमा शासन कसरी गर्ने भन्नेबारे लामो चर्चा छ । धेरैजसो प्रश्न कथाहरुको उदाहरण दिएर अविस्मरणीय बनाई उत्तर दिइएका छन् । र पनि हरेक कथा या त राजाका छन्, या ऋषिका । हरेक कथामा राजा, ऋषि वा अन्य कुनै अलौकिक पात्र हुन्छन् । साधारण मान्छे मात्र भएका कथा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । महाभारत र रामायणको प्रभाव भएको हाम्रो मुलुकमा यही शैलीको प्रभाव लामो समय रहिरह्यो ।
अर्थशास्त्रीहरुका लागि औसत जनताका दुःखकष्टको वर्णन राजामहाराजाको जत्तिकै महङ्खवपूर्ण हो । तर पुरानो साहित्यमा यो सजिलैसँग पाइँदैन । यसको असर गोर्खा राज्य विस्तारकालको मुलुकको जनजीवन बुझ्न सक्ने हाम्रो क्षमतामा परेको छ । हामीलाई थाहा छ, धेरै कारणले लडाइँ सजिलो थिएन । दामोदर पाँडेको पालामा विसं १८५८ मा एक मुरी बिजनको खेतको कर रू. १ थियो भने अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्ने बेला त्यसको १३ वर्षपछि विसं १८७१ मा रू. ५ । लडाइँ बढ्दै जाँदा धेरै नेपालीहरु यस्तै बढ्दो करको मारमा परेका थिए । घरका छोराहरु लडाइँमा घिसारेर लगिए । कैयौं बुहारी सती पठाइए ।
पुराना नेपाली कवि वा लेखकले विसं १८७३ सम्मको राष्ट्र विस्तारका क्रममा बढ्दो पोत तिर्नुपरेका रैकर जग्गामा बसेका रैतीहरु, कुत बढाबढ गरेर जग्गाको उत्पादन बचत खेती गर्नेको हातबाट खेती नगर्नेको हातमा पु¥याउँदा दुःखी भएका किसानहरु, झारामा काम गर्नुपरेका व्यक्ति, धोक्रोमा पैसा बोकेर तिर्जा किन्न आउने धोक्रे र तिनीहरुबाट सताइएका किसानको कथा पनि लेखिदिएको भए हामीलाई वसन्तपुर दरबारमा कसले कसलाई काट्यो भन्ने इतिहास भनेर पढाइने कर्कश व्याख्यानबाट केही राहत मिल्थ्यो । एकीकरणका बेला र त्यसपछि पनि लड्न घरबाट उठाएर लगिएका जवानहरु, युद्धले उठीबास लगाएका व्यक्तिहरु, रणमा घाइते भएर उपचार नपाई बिस्तारै बितेका योद्धाहरु, धुकचुक भएर छोरा फर्कने दिन कुरेका आमाहरु, उत्ताउलो भएर लड्न आफैं सुरिएर हिँड्ने अल्लारे युवाहरु, वीर सेनापतिहरुले बूढो उमेरमा उठाएर लगेका कलिला महिलाहरु, वीरहरुको मृत्युपछि जबर्जस्ती सती पठाइएका महिलाहरु, युद्ध सकिएपछि पैसाको आशामा लाहोर जाने युवाहरु, पन्जाबको पतनपछि लाहोरको साटो मुग्लानमा गएर ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुने नेपाली ठिटाहरुको धेरै कथा हाम्रो साहित्यको त्यसबेलाको अल्पविकासले छुटेको छ ।
लडाइँ शौर्यगाथा मात्र होइन, लडाइँपछि जनतालाई केही भएको थिएन, जे हुनु भइहाल्यो भन्ने जस्ता कुरा सही होइनन् । लडाइँ भनेको भयावह कुरा हो । यो कुरा अर्थशास्त्र र साहित्य दुवैमा आउन जरूरी छ । नेपालीहरुले धेरै लडाइँमा भाग लिएका थिए । कुनै हाम्रो आफ्नै मुलुकका लडाइँ थिए, कुनै अरुका लागि लडिएका । तर सबैको असर हाम्रा सर्वसाधारणलाई विभिन्न तरिकाले परेका थिए । लडाइँका आयामहरुलाई सबै आयामबाट हेरिनुपर्छ । गन विद द विन्डमा मार्गरेट मिचेलले लडाइँमा युवाहरु गएपछि घरमा बसेका महिलाहरुको दशाको कथा भने झैं हाम्रामा त्यसरी कथा भनिएनन् । केही अपवाद नभएका होइनन् । भाषावंशावलीमा पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गरेपछिको कान्तिपुरको वर्णन गर्दै भनिएको छ, ‘..येक नेवारका स्वास्नी अति राम्री थिइन्, गोर्षामहाराजबाट प्रवेश गर्‍या उप्रान्त डराई पैह्ले स्त्रीलाई मारी पछिबाट आफूले पनि ज्यान त्याग ग¥यो ।’ लडाइँको विभीषिकाको वर्णन गर्दै सुन्दरानन्द बाँडाले आफ्नो त्रिरत्न सौन्दर्यगाथामा लेखेका छन्—
पृथ्वीनारायण शाह मर्दा नौ जना श्रीमती सती गएका थिए । उनकी कान्छी श्रीमतीको उमेर निकै कम हुँदो हो । यी सतीहरु मर्दाको स्थिति कहिल्यै सजिलो हुँदैनथ्यो । भक्तपुरका युवराज अच्युत सिंह मर्दा विष्णुमतीमा उनकी रानी सती गएको हेरेपछि गरूडनारायण गोङ्गल बेहोस भएका थिए । त्यसपछि रणजित मल्लले माया गर्दै भनेका थिए, ’हेर ग‘ड, तँ यति कमजोर रोगी रहेछस्, कसरी मसँग काशी जालास् ? घरै फर्की ।’ त्यो बेलाको नेपालमा बाँच्न यसैले मुटु बलियो भएको हुनुपथ्र्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौं विजयपछि गोर्खामा युद्धको महिमा चर्को भएको हुनुपर्छ । नामहरुले कतिपय बेला त्यो युगको कथा बोलेका हुन्छन् । नामहरु हेर्दा कहिलेकाहीँ मानिसको परिवारको शिक्षाको स्तर पनि अड्कल गर्न सकिन्छ । जस्तो कसैका हजुरबुबाको नाम तपाईंले सोध्दा उसले कञ्चन भन्यो भने, रुपक भन्यो भने ती त्यो बेलाका तुलनात्मक रुपमा शिक्षित व्यक्तिका सन्तान रहेछन् भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ । जेठो जन्मे कृष्ण, माहिलो जन्मे राम, साइँलो छोरो जन्मे हरि राख्ने व्यक्तिहरुले या नाम खोज्न धेरै मिहिनेत गरेका नहोलान् या अद्वितीय या आधुनिक नाम राख्ने शिक्षा नभएकाले त्यस्तो भएको हुँदो हो ।
आफ्ना छोराछोरीको नाम अरु कसैले नराखेको सुन्दर नाम राख्ने हुटहुटी थोरै व्यक्तिमा हुन्छ । झन् थोरै व्यक्तिले त्यसो गर्न सक्छन् । अर्कोतिर गाउँमा सबैभन्दा पीडित मानिसका छोराछोरीको नाम गोल्छे, पुड्के, दले, सन्ते, डल्ली भएको हुन सक्छ । पण्डितले पनि थोरै दक्षिणा बोकेर मन नलागीनलागी राखिदिएका नामहरु कहिलेकाहीँ सुन्दैमा चिन्न सकिन्छ ।
नेपाल देश बनेपछि पनि लामो समयसम्म साहित्य फस्टाउन पाएको थिएन । राजाहरु प्रताप सिंह, रणबहादुर, गीर्वाणयुद्ध कोही पनि ४० वर्ष पनि बाँचेनन् । अर्कोतिर भक्तपुरका अन्तिम चार राजाहरु रणजित मल्ल (४८ वर्ष), भूपतीन्द्र मल्ल (२६ वर्ष), जितामित्र मल्ल (२३ वर्ष) र जगतप्रकाश मल्ल (२९ वर्ष)ले औसत ३१ वर्ष शासन गरेका थिए । ती कलामा पारङ्गत भएर निस्किए । कतिले आफ्नै नाममा किताब लेखे ।
आज पनि दरबार क्षेत्र हेर्ने हो भने नेपालका पहिलाका राजाहरु कसैको पनि दरबार क्षेत्र सुन्दरता र भव्यतामा भक्तपुरकोसँग तुलनायोग्य छैन । गोर्खाले भक्तपुर विसं १८२६ मा सर गर्दा रणजित मल्ल ७४ वर्षका थिए, त्यतिको पाको र धीर राजा शाहवंशले कहिल्यै दिन सकेन । धेरै कुरामा यसको असर देखियो । साहित्यलाई आडभरोसा दिनुपर्ने, विद्यालय खोल्नुपर्ने जस्ता विषयमा हाम्रा शासकको ध्यान जानै सकेन । ती न साहित्यका उत्पादक भए, न खरिदकर्ता ।
लाग्छ, लडाइँका बेला बरू साहित्यभन्दा युद्धप्रेम र उन्माद बढी थियो । त्यस बेलाको नाम हेरौं— रणबहादुर शाह त छँदै थिए, उनका छोरा रणोद्योत शाह र अर्को राजा भएका छोरा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको नाम पनि युद्धसँग सम्बन्धित थियो । अमरसिंह थापाका छोराहरुको नाम रणवीरसिंह, रणसुर सिंह, रणध्वज सिंह, रणभीम सिंह, रणजोर सिंह आदि थियो । तुलाराम पाँडेका छोराहरुको नाम रणजित र जगजित पाँडे राखे । अनि नातिहरुका नाम पनि जङ्गवीर, वीरभञ्जन, सिंह वीर, शमशेरबहादुर थियो । दामोदर पाँडेका छोराहरुको नाम रणजङ्ग, रणदल, रणकेशर, रणबम आदि थियो । रामकृष्ण कुँवरका छोरा रणजित कुँवर थिए । जसवन्त भण्डारीका खलकमा पनि रणसुर भण्डारी, रणदेव भण्डारी थियो । शिवराम बस्न्यातका खलकमा झन् नहुने कुरै भएन । यिनका नातिहरुको नाम रणवीर सिंह, रणदीप सिंह, रणधीर सिंह थियो ।
भीमसेन थापाका भाइ नयनसिंह थापाका छोरा माथवरसिंह र नाति रणउज्वल थापा थियो । जङ्गबहादुरभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री पनि राजखलकका चौतरिया फत्तेजङ्ग शाह थिए । यी नामले त्यो युगको जेटगेस्ट बुझ्न हामीलाई सहयोग गर्छ । साहित्य त्यस बेला सम्भवतः टाढाको कुरो थियो । नयाँ गोर्खाली विजेताहरु सामूहिक रुपमै नयाँ नाम खोज्ने र अद्वितीय नाम राख्ने हुटहुटी भएका शिक्षित व्यक्ति थिएनन् ।
पोखराका धर्मराज थापाले लोकगीतहरु सङ्कलनका साथै मेरो गृहजिल्ला चितवन पुगेर त्यहाँको बारेमा चितवन दर्पण भन्ने पुस्तक नै लेख्नुभएको छ, जहाँ भर्खर बस्ती बसाइएको चितवनका निकै कथा छन् । त्यो गुन केही भए पनि तिर्न मैले कास्कीका केही कथा कास्केली वृद्धहरुसँग सुन्ने कोसिस गरेको थिएँ । तीमध्ये यहाँ एकदुई राख्न चाहन्छु । तिनले एक सय वर्षअघिको, डेढ सय वर्षअघिको कास्कीको परिवेश कस्तो हुँदो हो भन्ने कुराको उत्तरमा मलाई भनेका थिए—
धेरै दुःख थियो । … त्यसबेला मान्छेहरु ५५/६० वर्षमा मर्थे । ६० वर्षमा मर्दा त ओहो उमेर भएर गएछन् भन्ने हुन्थ्यो । लेकमा भन्दा तल बेसीमा बस्ने मान्छे चाँडै मर्थे । किरिया बस्नेहरु सानासाना बालख हुन्थे ।… रोग सबैतिर थियो । भुर्जुङ्खोलाका सुब्बाबाहेक सबै गाँडा थिए । घाचोक, काउँमान, लाचोकमा धेरै गाँडा र बोली बिग्रेका थिए; भिजुकीमा गाँडा थिएनन् । तोल्कामा थिए । सिसुवा, खुदीतिर विधवा बढी थिए । एक जना दिदीलाई सिसुवातिर बिहे गरेर नदिनू भन्दाभन्दै दिइयो, बिहे गरेको २७ दिनमा विधवा भइन् । पोखरामा नै औल लाग्छ भनेर मानिस बास बस्दैनथे । धिताल बाँस्कोटमा भने लाटा जम्मा दुई जना थिए ।
अर्थशास्त्रीका रुपमा हेर्दा एक परिवार टुक्रिनु, उमेरका महिलापुरूषहरु मर्नु, बच्चाहरु कुनै अभिभावकीय सुपरिवेक्षणबिना हुर्कनुको दीर्घकालीन असर हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी प¥यो होला भन्ने प्रश्न महङ्खवपूर्ण छ । हाम्रो समाजमा इतिहासका शिक्षा लिने वातावरण नै बनेन, घरघरभित्र हुनुपर्ने संस्थागत सम्झना (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी)को मात्रा पनि कम भयो । यसले हरेक पुस्ताले महङ्खवपूर्ण सामाजिक ज्ञान आफैं सिक्नुपर्ने अवस्था आयो । युद्धको यो असर आज सत्य हो भने पहिला पनि सत्य थियो ।
भीमसेन थापाको पालाको इतिहासलाई आर्थिक इतिहासकार लुडविग स्टिलरले साइलेन्ट क्राइजमा उल्लेख गरेका छन् । शासन त्यो बेला पनि जहानियाँ नै थियो, जनता करको उच्चदरले पिल्सिएका थिए । तर नेपाल राज्यका रुपमा बिस्तारै आकार लिँदै थियो । शासक र शासितबीच संवादको स्थिति भने थियो । जनता कर धेरै भयो भने सरकारसम्म आवाज पु¥याउँथे । सरकार सकेसम्म मध्यम विन्दु खोज्थ्यो । सुगौली सन्धिपछि मुलुक र सेनाको स्पिरिट क्षतविक्षत पक्कै भएको थियो । एकातिर करको दर उच्च थियो, अर्कातिर विसं १८९२ मा रङ्गनाथ पौड्याल आयोगले दिएको सुझावअनुसार राज्यको अनावश्यक खर्च घटाएर मितव्ययी बन्नुपर्ने देखिएको थियो । सेनाहरुमा भने तलब कम भएको, लडाइँ नभएर काम नभएकोमा असन्तुष्टि थियो । महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार मान्छेहरु उच्चदरको मालपोतले धेरै पिल्सिएका थिए । कसलाई कति कर लगाउने केही निश्चित थिएन । तिरो तिरिरहेका चुनी किसानको अधिकार केही हदसम्म सुरक्षित थियो । तर बिर्ता वा जागिरमा बसेका किसानको अधिकार सुरक्षित थिएन ।
भीमसेन युगको महङ्खवपूर्ण घटनामध्ये एक बासट्ठीहरण थियो, जसमा धेरै मठन्दिर, गुम्बा, ब्राह्मणका बिर्ता हरण गरिएका थिए । रणबहादुर शाहले तिरहुते ब्राह्मणकी विधवा छोरी बिहे गरेर राज्यको उत्तराधिकारको समेत नियम फेरेको धेरै उच्च जातका जनतालाई चित्त बुझेको थिएन । उनलाई चाहिँ ब्राह्मणले आफ्ना कुरा मानेनन् भन्ने थियो । त्यसैको झोक उनले विसं १८६२ मा बासट्ठीहरणमार्फत फेरेका थिए । त्यसको असर दूरगामी भएको थियो । संयोग कस्तो भयो भने, पहिले वेगगतिमा पश्चिममा विजय हासिल गरिरहेका अमर सिंह थापा काश्मीरसम्म हान्ने सुरमा हिँडेका थिए । तर १८६३ सालदेखि भने उनी काँगडाको किल्लामा तीन वर्षसम्म त्यसै त्रिगर्त नरेश संसारचन्दलाई हराउन नसकी अड्किएर बसे । यिनले स्वाभाविक रुपले यसमा बासट्ठीहरणले गर्दा भएको पापको भूमिका देखे । लेखिका इन्दिरा जोशीले लेखेको अमरसिंह थापाको जीवनीमा प्रकाशित थापाले राजालाई लेखेको एक पत्रको व्यहोरा यस्तो छ—
हजुरले ब्राह्मणहरुका बिर्ता हरण ग¥याका बेलादेखि हजारौं ब्राह्मणहरु साह्रै फजिती पाई कङ्गाल भयाका छन् । काँगडा फत्य भएपछि ती बिर्ता फर्काइनेछन् भन्न्या कबुल गरी हजुरले मेरा र नैनसिंह थापाका नाममा लालमोहर लाग्याको हुकुम पठाइबक्स्याको थियो । त्यो काम हामीले पुर्‍याउन नसक्दा अहिले चारैतर्फ गोलमाल उठ्याको छ ।
त्यस बेला खुम्बु क्षेत्रमा बासट्ठीहरणको विरोधमा विद्रोह भयो, मानिसहरु मारिए । ती विद्रोहका कथा भने साहित्यले उतारेन । त्यस बेला लेखिएका नेपाली पुस्तकहरुमा करले पिल्सिएका, दुःख पाएकाहरुको कथा आउँदैन ।
महाभारतमा शान्तिपर्वमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई भनेका थिए, ‘राज्यको ढुकुटी भरिराख्नुपर्छ । भरेपछि यसलाई नचाहिने खर्च रोकेर, मितव्ययी हुँदै, राम्रोसँग जतन गरेर बचाउनुपर्छ र सधैं बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ । यो शासकले नित्य गर्नुपर्ने काम हो । राजस्व उठाउन नसक्ने राजालाई सबैले हेप्छन् (हीनकककशं हि राजानं अवजानन्ति मानवाः) । तर ‘न कोशः शुद्धशौचेन न नृशंसेन जायते; पदं मध्यम आस्थाय कोशसङ्ग्रहणं चरेत्’ अर्थात् धेरै उदार भएर पनि राजस्व सङ्कलन गर्न सकिँदैन, धेरै नृशंस भएर पनि हुँदैन, ठिक्क हुनुपर्छ ।’
जङ्गबहादुरलाई १८६२ को बासट्ठी हरणले धेरै परि पारेको थियो । उनले हरणजग्गा फिर्ता दिने नियम पनि ल्याएका थिए । जङ्गबहादुरले शासनमा आउनेब्त्तििकै तराईका कैयौं जग्गालाई जथाभावी बिर्ताका रुपमा दिन नपाइने थिति बाँधेका थिए । त्यसअघि राज्य कमजोर थियो, ऊ कैयौं ठाउँमा त आफंै कर उठाउन नसकेर पाँच साल ठेकी (पाँच सालका लागि कुनै क्षेत्रमा कर उठाउने ठेक्का) लगाउँथ्यो । त्यस्ता ठेक्का खानीमा पनि थियो । जङ्गवबादुर सत्तामा आउँदा राज्यकोष खासै बलियो पनि थिएन । राज्यको पूर्ण सैनिकीकरण पनि भएको थियो । सन १८५२÷५३ को एक रेकर्डअनुसार सरकारका नाममा भएको ३८ लाख ११ हजार ८३० मुरी खेतमध्ये ३१ लाख ७८ हजार ११० मुरी सेनालाई र बाँकी अधिकांश राजदरबार र राणा परिवारलाई जान्थ्यो । यो अवस्थामा कला, साहित्यको संरक्षण र प्रवद्र्धन कल्पनाबाहिरको विषय थियो ।
सरकारका तमसुक, सरकारले लेखेका चिठी र सरकारमा गरिएका हारगुहारका निवेदन पढेर अर्थशास्त्रीहरुले त्यस बेलाको उच्च कर र साधारण राज्यव्यवस्थाका असरबारे प्रकाश परेका छन् । महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार विसं १८९० मा भीमसेन थापाको शासनको अन्त्यतिर सल्यानमा कर उठाउने धोक्रेहरुले समय नदिई कडाइ गरी पैसा उठाउन खोज्दा धेरै किसान जमिन छाडेर भागेका थिए । योगी नरहरिनाथको एक खोजअनुसार त्यसको १३ वर्षपछि जुम्लामा विसं १९०३ वैशाखमा ज्युना चँदारालाई रू. २० मा कमारी बनाएर खरिद गरिएको थियो, जुन त्यस बेला साढे १० मुरी चामलको मूल्य थियो । बाउले लिएको छ रूपैयाँ २० वर्षसम्म नतिरेकाले जङ्गबहादुरको पालमा विसं १८२२ मा डोटीमा एक महिलालाई बलात् कमारी बनाइएको थियो । यी कथा हाम्रो त्यो बेलाको साहित्यले भने छुटाएको छ ।
विसं १९२० देखि १९२४ सम्म तराई र त्योसँग जोडिएका भारतका जिल्लामा गएको भोकमरीको असर त झन् भयावह थियो । धेरै बाबुआमाले आफ्नै छोराछोरी बेचेका थिए । यसरी बेचिएका केही दास पछि जङ्गबहादुरको पहलमा फिर्ता पनि गरिएको थियो । र स्वतन्त्र मानिसका सन्तानलाई कमाराकमारी बनाउन नपाइने नियम पनि सुरू गरिएको थियो । तर ती दिन भयावह थिए, मानिसको सम्पत्तिको संरक्षण र मानिसको भविष्यप्रतिको आशावादिताका दृष्टिले पनि । राजामहाराजालाई समेत आफ्ना सन्तानको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा सुनिश्चितता थिएन । माथवरसिंह आफूलाई गोली लागेपछि आफ्नी आमा र सन्तानलाई केही नगरिओस् भनेर भिक्षा माग्दै राजाको अगाडि रोएका थिए, जङ्गबहादुरका सन्तान या मारिएका थिए या देशनिकालामा परेका थिए । राजाकै सन्तानको समेत भर थिएन । देशनिकालामा परेका चौतरिया र सानामै आँखा फुटाइएका राजकुमारहरु यत्रतत्र थिए । राजा पृथ्वीनारायण शाहकै आफ्नै छोरा बहादुर शाह तातो तेलमा डुबाएर मारिएका थिए, नाति रणबहादुरको हत्या भएको थियो, पनाति विदुर शाहीहरु सानैमा विष्णुमतीमा लगेर काटिएका थिए । हामीले बनाएको पद्धतिको सुरूवाती बेला कोही सुखी थिएन, कोही ढुक्क थिएन । यी कथा त्यो बेलाको हाम्रो साहित्यले छुटाएको छ ।
१८०१ को नुवाकोट विजयलाई एकीकरणको युद्धको आधारवर्ष मान्ने हो भने सुगौली सन्धिको वर्ष अर्थात् विसं १८७३ सम्म ७२ वर्षसम्म गोर्खाली सेनाले निरन्तर लडेको थियो । १८७३ देखि भने शान्ति छाएको थियो । तत्कालीन रेजिडेन्ट ब्रायन हडसनका अनुसार नेपालको बाह्य व्यापार युद्धपछि निकै राम्रो भएको थियो । १० वर्षमा तीन गुणा बढेको थियो । त्यो शान्तिकालको साहित्य भने अझै जनताको तहमा उत्रिको थिएन । नेपाली भाषामा लेखिएका किताब त्यो बेलासम्म रामायण, महाभारत, स्वस्थानी, ऐतिहासिक चरित्रमा आधारित तिलस्मी खालकै थिए ।
भानुदत्तको हितोपदेश मित्रलाभ (विसं १८३३), शक्तिबल्लभ अज्र्यालको हास्यकदम्ब (विसं १८५५), गौरेश्वर शर्माको बेताल पञ्चविंशती (विसं १८६६) विष्णुपद पाध्याको लालहीराको कथा (विसं १८८९) यसका केही उदाहरण हुन् । विसं १८७८ मा नेपालीमा अनूदित स्वस्थानी व्रतकथा भने अत्यन्त लोकप्रिय हुन पुग्यो । पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश भनिएको दिव्योपदेशको रचना सम्भवतः भने १८३१ मा नभई निकै पछि भएको हुँदो हो । दिव्योपदेशमा अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धी विभिन्न कुरा पनि छन् ।
नेपालमा विसं १९०८ मा गिद्धे प्रेस, त्यसको केही वर्षपछी मनोरन्जन छापाखाना सुरू भए । विसं १९५० मा मोतीराम भट्ट र पण्डित कृष्णदेवको सयुंक्त स्वामित्वको निजी क्षेत्रको पहिलो पशुपत प्रेस ठहिटीमा खुल्यो । सुरूका सरकारी प्रेसले प्रकाशन क्षेत्रमा कुनै ठूला क्रान्ति ल्याउन सकेनन् । पशुपत प्रेसको भने विभिन्न तरिकाले नेपालमा प्रभाव भयो । पहिलो पत्रिका सुधासागर पनि यही प्रेसबाट विसं १९५५ साउनमा निस्कियो । विसं १९६० तिर सरकारी गोरखापत्र प्रेसको स्वामित्व केही समयलाई पाएका जयपृथ्वीबहादुर सिंहले सम्भवतः हाम्रो साहित्यको स्तर माथि लैजाने प्रयास गरेका हुँदा हुन् । तर धेरै सफल भने भएनन् । नेपाली साहित्यमा विविधता ल्याउन नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति नै चाहियो, जसमा बस्दाका अनुभवहरु बालकृष्ण समले आफ्नो जीवनी मेरो कविताको आराधानमा उल्लेख गरेका छन् ।
बढ्दै गएको शिक्षा र लामो समयको शान्तिले विस्तारै भने पनि धनी हुँदै निस्कँदै गरेको एक मध्यमवर्गीय तप्काले साहित्यको सुरूको विकासलाई निर्देशित ग¥यो । र राणाशासनमा आएर केही यथार्थवादी लेखाइका राम्रा नमुना निस्कन थाले । पहलमान सिंह स्वाँरको एकलाख रुपैयाँको चोरी (१९७४), पुष्करशमशेरको कथा परिबन्द आदी यसका उदाहरण हुन् (पुष्करशमशेरको अर्को कथा स्वार्थत्याग पनि न्याय निरुपण गर्ने राणाकालीन शैली र त्यससँग व्यक्तिगत यौन वुभुक्षाको सम्बन्धबारे केन्द्रित छ) । राणाकालीन न्याय निरुपणको अर्को राम्रो उदाहरण हेनरी ओलफिल्डको तत्कालीन राणाकालीन नेपालमा शिरच्छेदन गरेर मृत्युदण्ड दिदाँको वर्णन र प्रकाश वस्ती सम्पादित कानुनसम्बन्धी केही ऐतिहासिक अभिलेखहरुमा उल्लिखित १९३८ सालको पर्वपछिको मृत्युदण्ड पाएका व्यक्तिहरुको काटिन लैजाँदाको मनोदशा तथा संवादले पनि दिन्छन् । विसं १९७४ तिर योगमायाले लेखेका भनिएका भावनाहरु पछि प्रकाशित भए, जसमा योगमाया वर्गीय विभेद तथा शोषणविरूद्ध प्रखर वक्ताका रुपमा देखापर्छिन् । अरु विद्रोही आवाजहरु तत्कालीन युग सुहाउँदो रुपमा प्रकाशित भए । सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले विसं १९७७ मा विम्बहरु प्रयोग गरेर लेखेको भनिएको मकैको खेती यसको एक उदाहरण हो ।
अर्थशास्त्रीहरुको मतमा कानुनी व्यवस्था कमजोर हुँदा, गुणदोष छुट्टिन समय लाग्दा वा गलत रुपमा छुट्टिँदा अर्थतन्त्र स्वभावैले कमजोर हुन्छ । र लगानीमा व्यक्तिहरुको मन जाँदैन । जङ्गबहादुरले जग्गामा खेती गरेर तिरो तिरिरहेका व्यक्तिको जग्गा अरुलाई मोही लगाउन नपाउने व्यवस्था ल्याएसँगै नेपालमा जग्गामाथि सम्पत्तिको हक स्थापित हुन थाल्यो भने चन्द्रशमशेरले विसं १९७९ वैशाख २ बाट जग्गा दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित बनाएर मालपोत अफिसहरु खुलेसँगै यो झन बलियो हुन थाल्यो । उद्योगमा लगानीका धेरैजसो कुराहरु जुद्धशमशेरको पालामा व्यवस्थित गर्न सुरू गरिए । सरकारी पहलमा बजारहरु (अर्थात् गोलाहरु) खोल्ने काम अलि पुरानै भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रका महङ्खवपूर्ण सहर विराटनगर, नेपालगन्ज, वीरगन्ज खोल्ने, भित्री पहाडका धरानलाई सहरको रुप दिने काम वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरको पालामा सीमामा भारतीय रेलको आगमनसँगै भए । भर्खरै बसेको सहर वीरगन्जमा रेल आउँदाको कथा सजीव रुपमा साहित्यमा उतार्ने काम चाहिँ धनुषचन्द्र गोतामेको विसं २०३५ मा घामका पाइलाहरुमार्फत भयो । अरु सहरका सुरूवाती दिनका कथा नकोरिएकाले ती विस्मृतिको गर्भमा रहे ।
नेपालमा चाहे जस्ता उपभोगका, आयका, बसाइँसराइका तथ्याङ्कहरु २००७ सालको क्रान्तिपछि पनि उत्पन्न भएनन् । २००८ सालमा हामीले मोहीको लागत लिने भनेर सर्भे सुरू गरेका थियौं, सेन्सस पनि २०११ देखि गरेका छौं । तर यी विस्तृत नभएको र हाम्रो तथ्याङ्कशास्त्रसम्बन्धी ज्ञान पनि सीमित भएकाले हाम्रा रेकर्डहरु २००७ सालपछि पनि ठीकै मात्र रहे । तर हाम्रो साहित्य भने सुरूवाती दिनमा ह्वात्तै बढ्यो। कलेज पढ्ने विद्यार्थीको पढ्ने सामग्रीको भोक बढेर पनि होला, स्वतन्त्रता भर्खर उपभोग गर्न थालेर पनि होला, नेपालीहरु हातिमताइका कथा, गुलबकावलीका कथा, मधुमालतीका कथा, पिनासका कथा, लालहीराका कथाबाट आफ्ना कथा लेख्ने स्थितिमा पुगे । सामाजिक यथार्थमा आधारित ती कथाले हामीलाई काठमाडौं र मुलुकका ती कुराहरुबारे बताउँछन्, जुन हाम्रो सीमित तथ्याङ्कमा आधारित अर्थशास्त्रले बताउन सक्दैन । उदाहरणका लागि २०११ सालमा हृदयचन्द्रसिंह प्रधानले नारीवादी स्वास्नीमान्छे लेखे; शङ्कर कोइरालाले आञ्चलिक उपन्यास खैरेनीघाट २०१८ सालमा लेखे । भीमनिधि तिवारीले २०२७ सालमा प्रगतिशील उपन्यास इन्साफ लेखे । र रमेश विकलले प्रगतिशील आञ्चलिक अविरल बग्दछ इन्द्रावती“ २०४० सालमा लेखे । यी सबै उपन्यासले नयाँ गोरेटो कोरे र समाजको नयाँ तस्बिर देखाए ।
तर पनि साहित्यले धेरै क्षेत्र छुन सकेको थिएन । संसारसँग जोडिँदै गरेको नेपालको सुरूवाती दिनका कथा पनि साहित्यमा राम्रोसँग लेखिएका छैनन् । राणाकालसम्म विदेशीका लागि नेपाल बन्द थियो । तर नेपालीहरुलाई विदेश जान खुला थियो । र नेपालीहरु विश्वविजेता जस्ता ब्रिटिसको पछि लागेर संसारका चारै कुना पुगेका थिए । घर सम्झी रोएको होला, डाँडा काटी गएको नेपाली भन्ने गीत गाउने धर्मराज थापाले टिपेको कथा यस्तै व्यक्तिको थियो । तर ती रोएर मात्र बसेका थिए कि हाम्रो देश किन अघि बढेन भन्ने सोचेर पनि बसेका थिए होलान् ? तिनले आफ्नो मुलुकको शोषणदमनलाई नबुझेका थिए होलान् भन्न पनि गाह्रो छ । आजका एनआरएन जस्तै त्यस बेलाका एनआरएन पनि नेपाल फर्केर देशलाई सुधार्छु भन्ने सोचाइ त राख्थे होलान् । वास्तवमा धेरै ठाउँमा भर्खर स्कुलहरु खुल्दा शिक्षक लाहुरेहरु नै थिए ।
हामीले थाहा नपाएको प्रश्न अहिले के हो भने, कसरी नेपालीहरुको विदेश जाने क्रमले नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्यायो ? बाहिरबाट आएको धनले, रिटायर्डहरु र विधवाहरुले पाएको पेन्सनले, देखेर आएका नयाँ प्रविधिले कसरी गाउँहरुलाई फरक पारे ? रेडियो घन्काउँदै, घडी लगाउँदै, रूमाल भिर्दै, चुरोट पिउँदै, तास खेल्दै आउने लाहुरेले नेपालको परम्परागत आर्थिक जीवनलाई कसरी फरक पारे ? के गरिब जनताको वित्तीय पहुँचको स्थिति राम्रो हुँदै गयो ? के लाहुर जाने वर्गले धनमा लाहुर नजाने वर्गलाई जित्यो ? राईलिम्बूहरु विसं १९५० तिर मात्र ब्रिटिस आर्मीमा जान सुरू गरेको परिप्रेक्ष्यमा के चौबिसे राज्यहरु पूर्वी राज्यहरुभन्दा आर्थिक रुपले, सामाजिक रुपले केही अघि हुनु लाहुरको उपज थियो ? यी प्रश्नको उत्तर न अर्थशास्त्र, न साहित्यमा भेटिन्छ ।
विसं १९८६ मा अमेरिका र पश्चिमी विश्वमा ठूलो आर्थिक मन्दी भयो । त्यहाँका उत्पादित सामानलाई नेपाल आउन सजिलो बनाइदिएर भीमशमशेरले मुलुकलाई बाँकी विश्वसँग जोडिदिएका थिए । जुद्धशमशेरले पनि घरमा लगाउने कर्कटपाता ल्याउन फुकुवा गरिदिए । त्यसपछि नेपाली घरमा छाना पहिले जस्ता रहेनन् । नेपालीको त्यो बेलाको आयातित सामानको उपभोग गर्ने संस्कृतिको समाजमा असर कस्तो प¥यो ? साहित्यमा यसका केही वर्णन पाइन्छन् । विसं १९९२ मा प्रकाशित रुपमतीमा पात्र रविलालको पहिरन वर्णन गर्दै रूद्रराज पाण्डे लेख्छन्— रविलाललाई कार्चोपी टोपी, चेन र कस्मिराको कोट, चुनिचुनाउ परेको खुट्टामा टम्म टाँसिने नैनसुतको सुरूवाल र रेसमी कमिज, नयाँनयाँ फेसनका जुत्ता, जापानी रेसमी मोजा, जेबमा बुट्टे रेसमी रूमाल, नारीमा स्विस वेस्टएन्ड वाच घडी इत्यादिले सजिसजाउ भएर हिँड्नुपर्थ्याे ।
२००७ सालपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन त भयो भयो, भौतिक परिवर्तन पनि भयो । नेपालीहरु रेडियो सुनेर देशविदेशका कुरा सुन्न पाउने भए । दल खोल्न पाउने भए । २०१३ सालमा त्रिभुवन राजपथ बन्यो । काठमाडौंका मानिस गाडी चढेर भारत पुग्न सक्ने भए ।
राणाशासनमै लाहुरेका रुपमा देशविदेश चहारिसकेका नेपालीका बस्ती भारत, भुटान, बङ्गालादेश, बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया हुँदै सिङ्गापुरसम्म भेटिने स्थिति भएको थियो । ती नयाँ विकासले ल्याएको परिवर्तनको आर्थिक रुपमा अझै राम्ररी र विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन । तर साहित्यमा भने प्रतिबिम्बित भएको छ । सम्भवतः हास्यव्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालले जय भुँडीमा प्रकाशित व्यङ्ग्यहरुमार्फत यी विकासलाई सबैभन्दा राम्रोसँग अमर बनाएका छन् । मान्छेहरु कुरै नबुझी लाहुर गएका छन् भन्ने तर्क उनको लाहुरेको यात्रासंस्मरणमा छ, जहाँ प्रमुख पात्र वीरबल अतिथि इन्जिनियरहरुले बनाइदिएको बाटोघाटोको नक्सा झैं १० तिर टेढिएर लम्किन गएकोमा माफ माग्छ र ‘असारसाउनको माटो, बाइरोडको बाटो; ड्राइभर रमले रन्न, ट्रक यात्रुले टन्न’ भएको यात्रा गर्दै रक्सौल पुग्छ । भैरव अर्यालको चन्द्रलोक कसको निबन्धमा त्यस बेलाको काठमाडौंका युवाहरुको विदेशमा भएका अन्तरिक्षमा को पहिला हुने प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अवधारणा कस्तो थियो भन्ने झलक पनि मिल्छ ।
विसं २००८ नेपालका लागि नयाँ थियो । त्यो वर्ष नेपाल सरकारले बजेट ल्यायो । मुलुकमा समृद्धि र गरिबी हटाउने दुई लक्ष्य सँगसँगै लगिनेछ भन्यो । २०१६ सालमा सरकारले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग स्थापना ग¥यो । यसले बिस्तारै अर्थशास्त्रीहरुलाई मुलुकको कथा भन्न सक्ने ठाउँमा ल्यायो । तर तथ्याङ्कहरु सधैं कम हुन्छन्, खोजेका सबै कथा पनि यिनले भन्दैनन् । विसं २०२० तिरको काठमाडौंको स्थिति तथ्याङ्कबाट आउने एक हुन्छ, निबन्धकार शङ्कर लामिछनेको कलमबाट आउने अर्को हुन्छ । लामिछाने विसं २०२५ मा लेखिएको गौथलीको गुँडमा काठमाडौं सहरमा चर्पी नभएको कुरालाई यसरी लेख्छन्—
लामिछाने उनको एक पत्र सम्पादकलाई पढ्ने लेखकलाई २०१९ भदौको काठमाडौँको हालत यसरी बताउँछन्—
पानी परिरहेछ, झमझम । भर्खरै राजदूतहरु र मम्त्रीहरुको मोटरको ताँती फक्र्यो— नरप्रताप थापाको शोकसभा थियो रे रञ्जनामा ।… सडकपारिपट्टि एउटा माग्ने जस्तो मानिस गणेशथानको देवलको चौतारामा बसेर लगौंटीमा अलमलिएको जुम्रा मारिरहेछ ।
नेपाली साहित्यमा काठमाडौंका र दार्जीलिङका कथा धेरै लेखिए । दार्जीलिङको योगदान चर्चा गर्नु मेरो यो लेखको लक्ष्य होइन । तर त्यो सानो ठाउँले एक जमानामा पूरै नेपालीभाषीहरुको सांस्कृतिक शक्ति निर्धारण गथ्र्यो । नेपालगन्जका कथा सनत रेग्मी र पछि नयनराज पाण्डेले लेखे । कर्णालीका कथा बुद्धिसागरले लेखे । गौतमहरुले वीरगन्जका कथा लेखे । र पनि नेपाली साहित्यमा भन्न छुटेका आञ्चलिक कथाहरु भने धेरै छन् । २०११ सालको बाढीपछि धेरै पहाडियाहरुलाई बसाइएको चितवनको सुरूका दिनहरुबारे कथा लेखिएन । ती दिनबारे बुझ्न अहिले पनि बजेट वा पञ्चवर्षीय योजनाका पुराना रेकर्ड नै खोल्नुपर्छ । त्यस्तै मुलुकलाई सामन्ती युगबाट अर्धसामन्ती युगमा ल्याउने २०१६ सालको बिर्ता उन्मूलन कार्यक्रम, २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमका गाउँगाउँमा परेका असर पनि साहित्यमा राम्ररी आएका छैनन् । सयौं वर्ष चलेको ल्हासा व्यापार र ल्हासा जाने नेपालीका कथाहरु पनि केही संस्मरणमा बाहेक राम्रोसँग लेखिएका छैनन् । २०३० सालतिर बिस्तारै जुर्मुराउन थालेको नेपालको पर्यटनले काठमाडौंका अलावा पोखरा, चितवन, सोलुखुम्बु क्षेत्र, मुस्ताङ क्षेत्र र हालै लुम्बिनीलाई असर पारेको छ । ४० को दशकमा केही चलचित्रले ¥याफ्टिङ व्यवसायका कथा लेखे, गाइड भएर काम गर्नेका कथाबाहेक अविस्मरणीय कृतिका रुपमा त्यहाँका आर्थिक परिवर्तन झल्किने गरी साहित्यिक अभिलेख अझै आएका छैनन् । अर्थशास्त्रीहरुको पनि ध्यान त्यतातिर सीमित रुपमा मात्र पुगेको छ ।
महिला साहित्यकारहरुले सुरूमा बढी ध्यान दिएका बुहार्तन, प्रेमका मुद्दा र पछि केन्द्रित भएका इब्सेनको कठपुतलीको घरको नेपाली संस्करणका कथाहरुका अलावा बढ्दै गएको महिलाका आर्थिक भूमिकाबारे लेखेका छन् । विपन्न परिवारका दुःख पाएका महिलाहरुका कथा धेरै पाइन्छन्, त्यसका अतिरिक्त प्रेमा शाहको पहेंलो गुलाफ, मञ्जु काँचुलीको वाकवाकीमा सम्पन्न परिवारका महिला पात्रहरुको झलक छ । स्व. अङ्गुरबाबा जोशीको अक्षर साधना र गोधुलीले एक महिला सफल पात्रको काठमाडौंमा आधारित कथा भन्छ । तर आजका महिलाहरुको अझै धेरै कथा नयाँ फ्रेमवर्कबाट लेखिन बाँकी छ ।
जति धेरै आञ्चलिक कथा लेखिन्छन, जति धेरै विविध जातजातिका कथा लेखिन्छन्, जति धेरै हुर्कंदै गरेका व्यवसायीहरुका कथा लेखिन्छन्, जति कथा, उपन्यास, कविताका पात्रहरुमा विविधता आउँछन् र जति उनीहरुको आर्थिक अवस्थाको, सङ्घर्ष र सफलताबारे लेखिन्छन्, त्यति नै भविष्यका अर्थशास्त्रीहरुलाई समाज बुझ्न सहयोग हुनेछ ।
राजनीतिक परिवर्तन देखिने खालका हुन्छन् । तिनका विभिन्न कोणबाट चर्चापरिचर्चा पनि हुन्छन् । तर मुलुकमा राजनीतिकसँगै धेरै आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन भएका हुन्छन् । तिनको सम्झना रहिरहोस् भनेर पनि केही यथार्थवादी साहित्यको जरूरत हुन्छ । एउटा फ्रेमवर्क र सिद्धान्तमा बाँधिएर उपलब्ध तथ्याङ्कहरुमा सीमित रहेर हेर्ने अर्थशास्त्रीका आँखाले यावत् मुलुकको विहङ्गम दृश्य देख्न सक्दैन, साहित्यले सक्छ । फ्रेन्च राज्यक्रान्तिबारे कार्लाइलले लेखे तर डिकेन्सको अ टेल अफ टु सिटिजले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सहायता गरेको छ ।
एउटा कोणबाट मात्र कथा भन्दा त्यसको असर अर्कै पर्छ । तथ्याङ्कहरु, कथाहरु विभिन्न तरिकाले हेरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपाली रिपोर्ट मात्र हेर्‍यौं भने हामी दिनका दिन यत्रा मानिस मरेर बाकसमा आइरहेका छन्; तैपनि किन नेपालीहरु विदेश गएका छन् भन्छौं । अर्थशास्त्री महेश्वर श्रेष्ठको एक अध्ययनअनुसार उनको अध्ययन समूहमा भएका विदेश गएका नेपाली दुई वर्षमा प्रतिएक हजार जनामा १.३ जना मरेका थिए भने यता देशभित्र सोही उमेरसमूहका नेपालीको मृत्युदर दुई वर्षमा प्रतिएक हजारमा ४.६ छ । अर्थात् विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको मृत्युदर नेपालमा बस्ने सोही उमेरसमूहका नेपालीको मृत्युदरभन्दा कम छ । यस तथ्याङ्कभित्र अरु उपकथा पनि छन् । अर्थशास्त्रभन्दा भित्र छिरेर, मिहीन तरिकाले समाजलाई केलाएका बसाइँ जस्ता विभिन्न समुदायका, विभिन्न भेगका कथा हामीले पढ्नै बाँकी छ ।
यस्ता कथाको बजार होला/नहोला भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । हालैका दिनमा उत्कृष्ट रुपले लेखे सबै खालका कथाको बजार छ भन्ने देखिएको छ । सरकार पनि यस्ता कलासाहित्य प्रवद्र्धन गर्न हिचकिचाउन हुँदैन । भर्तृहरिले भनेका छन—
साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः, त्रिणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशुनाम् ।
सरकार चलाउनेहरुमा पनि कहिलेकाहीँ सरकारको प्रमुख दायित्व यस्ता ‘अनुत्पादनशील’ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नु होइन भन्ने मत हुन्छ । यदि सम्झने हो भने केही दशकअघि मात्र सरकारहरुले यस्ता साहित्य तथा अन्य कलाका कुरामा सब्सिडी दिनुहुँदैन भन्ने बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको मत थियो । र उनले सुरूमा त्यसैले धेरै बजेट फ्रिज गरिदिएकी थिइन् । अर्थशास्त्री जान मेयस्र्कफले सन् १९८८ मा लेखेको इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ आर्ट्स इन ब्रिटेन त्यसैको प्रतिक्रियामा थियो, जसले सांस्कृतिक धरोहरहरुमा लगानी गर्न सरकारलाई त्यसपछि प्रेरित गर्‍यो । हामी थ्याचर जस्तै मुढे हुनुहुँदैन ।
देश के हो ? आखिर देश भन्नु, मुलुक भन्नु हाम्रो पुर्खाले देखेको एक सपना हो । नेपाल भन्ने कुरा छामेर छाम्न सकिँदैन । जसले राज्य विस्तार गर्दा जिते, तिनले सायद आफ्ना सन्तान यो मुलुकमा फलून् फुलून् भन्ने सोचेका थिए । जसले त्यो बेला हारे र पराजय स्वीकारेर यो मुलुकमा बस्ने निर्णय गरे, तिनले पनि लडिराख्नुभन्दा पराजय स्विकार्नुमै आफ्ना सन्तानको भविष्य देखेका हुँदा हुन् । देश विजेताले मात्र बनाएका होइनन्, कर तिरेर, आासु पुँछेर पराजितले पनि बनाएका हुन् । हामीले कोर्नुपर्ने, भन्नुपर्ने पनि सबैको कथा हो ।
(अर्थशास्त्री पौडेलले नेपाल साहित्य सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको मन्तव्य हो ।)